तपाइँले एक व्यापार ब्लग सुरु गर्न के आवश्यक छ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
फेब्रुअरी 19, 2021 फेब्रुअरी 18, 2021 करेन Sanders ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार
यसले अरू सम्भावित ग्राहकहरूसँग तपाईंको पहुँच अझ विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ।
भनाइको रूपमा, बिक्री गर्न उत्तम तरिका भनेको तपाइँको उत्पादनलाई माया गर्नु हो।
अन्ततः, लामो समय मा, तपाईं वफादार ग्राहकहरु को एक समुदाय को लागी जो तपाइँको उत्पादन को बारे मा निरन्तर कुरा र अन्य मानिसहरु तपाइँ बाट खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ।
धेरै कम्पनीहरूको मिति सकिएको जोखिममा छ। यसको एक कारण अनलाइन उपस्थितिको अभाव हो।
अब यो सुरुमा एक खतरा जस्तो देखिन सक्छ। जहाँसम्म, यदि हामीले यो कथन पूर्ण रूपमा भिन्न प्रकाशमा देख्यौं भने हामी भेट्न सक्दछौं कि यो वास्तवमै हाम्रो कल हो कि जब हाम्रो ईन्टरनेट ब्यापार भएको बेलामा हाम्रो व्यवसाय सान्दर्भिक रहन्छ।
WordPress.com सबै भन्दा राम्रो प्रयोग गरिन्छ जब तपाईं भर्खर बिन्दुमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं भर्खरै आफ्नो व्यापार अनलाईन सुरू गर्न सुरू गर्नुभयो।
एउटा चीज जुन हामीले धेरै जसो सफल कम्पनीहरूमा याद गर्छौं त्यो यो हो कि तिनीहरूले अनलाइन सामग्रीमा प्रभुत्व जमाउँछन्। एप्पल, अमेजन र अलीबाबा जस्ता कम्पनीहरूले सफल कम्पनीको सूचीमा आफ्नो छाप छोडे। यसको पछाडि गोप्य कुरा कसरी यो हुन सक्छ कि उनीहरू कसरी आफ्नो उपस्थिति र ब्रान्ड नामहरू अनलाइन विकास गर्न सफल भए।
यो कसरी उनीहरूलाई अनलाइन कुरा गर्न को लागी र आफ्नो नाम प्रासंगिक कुराकानीको सरलतम पनी अद्यावधिक राखे।
इन्टरनेटको बारे हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ कि यसले अब फोरमहरू, छलफलहरू र सञ्चारका अन्य साधनहरू विनियमन गर्ने तरिकामा एउटा ठूलो परिवर्तन गरिरहेको छ - यो जहाँ तपाईं हुन चाहानुहुन्छ।
तसर्थ, एक व्यापार ब्लगको विकास एक उत्तम निर्णय हो जुन तपाईले आफ्नो व्यवसाय बढाउनको लागि लिनुहुनेछ। अन्तिममा, यसले तपाईंलाई व्यक्तिलाई तपाईंको व्यवसायको बारेमा बढि कुरा गर्न मद्दत गर्दछ। यसले अरू सम्भावित ग्राहकहरूसँग तपाईंको पहुँच अझ विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ। तर पहिले सब भन्दा पहिले। तपाईलाई व्यापार ब्लग सुरू गर्न के चाहिन्छ?
WordPress को उपहार
वर्डप्रेस एक राम्रो स्टार्टर प्लेटफर्म हो तपाईको ब्यापार ब्ल्ग सेटअप गर्नका लागि (कम्तिमा पहिलो केही भागहरूको लागि)। त्यहाँ दुई विकल्पहरू छन्: नि: शुल्क डोमेन र सशुल्क डोमेन।
एक नि: शुल्क वर्डप्रेस डोमेन यस्तो देखिनेछ: www.yourwebsitename.wordpress.com
WordPress.com सबै भन्दा राम्रो प्रयोग गरिन्छ जब तपाईं भर्खर बिन्दुमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं भर्खरै आफ्नो व्यापार अनलाईन सुरू गर्न सुरू गर्नुभयो। तपाईको कम्पनी ब्ल्याकमा छिटो भन्दा छिटो शुरुवात गर्नु मद्दत पुर्‍याउँछ तपाईको कम्पनी विवरण जति सक्दो चाँडो अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ: तपाईको कम्पनी के हो, तपाई के सेवाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ र प्रस्ताव गर्नुहुन्छ र अन्य विवरणहरू। यद्यपि WordPress 'नि: शुल्क डोमेनको प्रयोग सीमित छ। एउटा चीजको लागि, तपाइँ वेबसाईटबाट सिधै बेच्न सक्नुहुन्न।
अन्य प्लेटफर्महरू हप्ता, ड्रुपल र जुमला हुन्। WordPress जस्तै, तिनीहरू पनि आफ्नो व्यापार ब्लग होस्ट गर्न आफ्नो वेबसाइट सेट अप गर्न को लागी नि: शुल्क सेवाहरु प्रदान गर्दछ। तपाईंको ब्लगको लागि अपग्रेड र मोनेटाइजेशन (अनलाईन बिक्रीको लागि तपाईंको वेबसाइट सक्षम गर्नको लागि पनि चिनिन्छ) सक्षम गर्नको लागि, तपाईंले वार्षिक सदस्यता मार्फत सशुल्क डोमेनमा लगानी गर्न आवश्यक पर्दछ। एक भुक्तानी डोमेन यस जस्तो देखिन्छ: www.yourwebsitename.org WordPress.org तपाईको व्यावसाय ब्लगमा गर्न सक्ने उत्तम अपग्रेड हो किनकि एकको लागि तपाई अब WordPress.com प्रयोग गर्ने तुलनामा आफ्नै वेबसाईट होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। स्व-होस्टिंग तपाईंको वेबसाइटले तपाईंलाई अनलाइन बिक्री गर्न र सहबद्ध बजारहरू र विज्ञापन कम्पनीहरूमा तपाईंको वेबसाइट खोल्न पनि अनुमति दिन्छ। अन्य भुक्तान गरिएका वेब होस्टिंग प्लेटफर्महरू नेमकेप, १ र १ र गोडाडी हुन्। तपाइँको २//1 वेबसाइट मर्मत सम्भार आवश्यकताहरू पूरा गर्न सशुल्क होस्टिंग कार्यक्रमहरूको बारेमा फेला पार्नुहोस्। अब तपाइँको वेबसाइट को डिजाईन शुरू गरौं।
यो पनि भ्रमण गर्नुहोस्: लाहोरमा एसईओ कम्पनी
एक वेबसाइट थिम छनौट गर्दै
WordPress ले यसको आफ्नै थिमहरू नि: शुल्क प्रदान गर्दछ, तर केहि प्रयोग गर्न अघि उनीहरूलाई सशुल्क डोमेन सदस्यता आवश्यक पर्दछ। WordPress थीम डाइरेक्टरी र थिम वनले तपाईंलाई सही डिजाइन छनौट गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंको व्यवसाय ब्लगलाई सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व गर्दछ। जे होस्, तपाईले निम्न विचार गर्न आवश्यक छ:
के यो मेरो छनौट दर्शकहरु लाई राम्रो छ?
के डिजाइन मेरो व्यापारको प्रकृतिसँग मेल खान्छ?
के विषय बिभिन्न उपकरणहरूको लागि पहुँचयोग्य छ (जस्तै मोबाइल फोन, पीसी, ल्यापटप, ट्याबलेट)?
के शीर्षकमा सार्वजनिक फोरम वा ग्राहक समर्थनको केहि प्रकार समावेश छ जुन मैले सामना गर्न सक्ने विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि हो?
के थिमले मलाई अनुकूलन उद्देश्यको लागि विकल्पहरूको विस्तृत सूची दिन्छ?
यो पनि भ्रमण गर्नुहोस्: लाहोरमा सर्वश्रेष्ठ एसईओ सेवाहरू
एक व्यवसाय ब्लग अनिवार्य रूपमा एक विवरण पोष्टिंग को बारे मा हो जुन तपाइँ बेच्न चाहेको उत्पादनको सबै प्रयोगहरू प्रदान गर्दछ: तपाइँको उत्पादनहरू र सेवाहरूको बारेमा कुरा गर्दै।
तपाईंको सामग्री विकास गर्नुहोस्
अब जब तपाइँसँग तपाइँको व्यवसाय ब्लग को लागी एक राम्रो डिजाइन गरीएको वेबसाइट छ, अब समय आयो योजना बनाउने र सामग्री विकास गर्ने समय।
भनाइ जाँदा, बिक्री गर्न उत्तम तरीका भनेको तपाईंको उत्पादनलाई माया गर्नु हो। यस आधारमा निर्माण गर्दा, तपाईंले आफ्नो रुचिहरूलाई केहिमा अनुवाद गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ जसले तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूको चासो जगाउँदछ। एक व्यवसाय ब्लग अनिवार्य रूपमा एक विवरण पोष्टिंग को बारे मा हो जुन तपाइँ बेच्न चाहेको उत्पादनको सबै प्रयोगहरू प्रदान गर्दछ: तपाइँको उत्पादनहरू र सेवाहरूको बारेमा कुरा गर्दै।
त्यसैले तपाईंको आवाज खोज्नु महत्त्वपूर्ण छ: राम्रो सामग्री उत्पादन गर्नको लागि तपाईं राम्रो लेखक हुनु आवश्यक छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाइँ कसरी लेख्नुहुन्छ वास्तविक रहनको लागि। तपाईका शीर्षकहरू ब्रेस्टस्ट्रम गर्नुहोस्
तपाईंको सामग्रीको योजना बनाउनुका साथै तपाईंको विमोचनको योजना बनाउने राम्रो तरीका हो। तपाईं आफ्नो उत्पादको लाभहरु बारे लेख्न सक्नुहुन्छ वा कसैलाई यसलाई समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई आफ्नो कम्पनी ब्लगमा पोस्ट गर्नुहोस्। यसले तपाइँलाई तपाइँको प्रभाव अनलाइन विस्तार गर्न र द गो मा नयाँ जडानहरू बनाउन अनुमति दिन्छ। अधिक व्यक्ति तपाईंको अनलाइन स्टोरमा किनमेल गर्छन्, अधिक व्यक्ति तपाईंको उत्पादनहरूको बारेमा लेख्न चाहान्छन्। अधिक मानिसहरु लाई तपाइँको उत्पादनहरु को बारे मा लेख्न को लागी, अधिक मानिसहरु को को लागी आकर्षित हुनेछ।
अन्ततः, लामो समय मा, तपाईं वफादार ग्राहकहरु को एक समुदाय को लागी जो तपाइँको उत्पादन को बारे मा निरन्तर कुरा र अन्य मानिसहरु तपाइँ बाट खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। यस बिन्दुमा, तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको ग्राहकहरू तपाईंलाई मद्दत गर्दै छन् तपाईंको व्यापार अनलाइन बढावा दिन। Findability र नेटवर्क अब प्राविधिक भाग आउँछ।
यो निश्चित गर्न कि तपाईको सामग्री अधिक व्यक्ति अनलाइन हेर्न सकिन्छ, तपाईले आफ्नो वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्न सावधानी अपनाउनु पर्छ ताकि यो अनलाइन खोज्न मिल्ने भयो। खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) ले तपाईको सामग्रीमा प्रयोग गर्ने शब्दहरूमा ध्यान दिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाई कफी सिमी बेच्नुहुन्छ, अन्य कुन शब्दहरु संग जोड्न सकिन्छ? र के सम्भवतः मानिसहरूले तपाईको गुगल खोजी पट्टीमा टाइप गर्न तपाईंलाई खोज्न सक्छ? कुञ्जी शब्दहरूका लागि खोजी गर्नु तपाईंको वेबसाइटलाई गुगल खोजी परिणामहरूमा अप्टिमाइज गर्ने अंश हो।
कीवर्ड अनुसन्धान गर्दै र यसलाई तपाइँको शीर्षकमा समावेश गर्दै, केहि शरीरका अंगहरू, र निष्कर्ष आवश्यक साबित हुनेछ (र अबसम्म सबैभन्दा थकाउने कार्य तपाईंले सम्भवतः प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ)। तपाईंसँग एसईओ विशेषज्ञहरू र सामग्री लेखकहरू तपाईंको सामग्रीमा काम गर्नका लागि विकल्प छ, वा तपाईं एसईओ कोर्सहरूको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ।
राम्रो एसईओ रणनीतिले तपाइँको व्यवसाय ब्लगको गुगल खोजीमा अधिक बार देखा पर्ने संभावना बढाउँदछ। तपाईंको व्यवसायलाई बढाउन र बढाउनको लागि साथीहरू भेट्न यो उत्तम तरिका हो।
अधिक जानकारीको लागि वेबसाइट हेर्नुहोस् डिजिटलमार्केटिंगहोर.कॉम
फलो-अप त्यो स्थान हो जहाँ पैसा छ
अन्य तरिकाहरू तपाइँको स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय COVID लाई अनुकूलन गर्न सक्छन्